Indlela yokwenza i-origami tulip ngokwakho, kwiklasi yeklasi. I-Tulip esuka ephepheni, isinyathelo ngeyiteyithi, umfanekiso, ividyo
Iphepha le-philiphu elixhasayo
I-bouquet ebalabala, eqokelelwa kwii-tulips zamaphepha ahlukahlukeneyo, ingazisa amanqaku ambala kumgangatho wegumbi kwaye inika abanye iimvakalelo ezintle. Ukwenza i-origami tulip ilula kakhulu. I-Technique ekhupha i-origami volumetric inflatable tulip iyakwazi ukuqonda ngisho nomntwana. Ukuba ufuna ukwenza iintyatyambo ezintle kwiphepha, isihloko sethu siya kuba mnandi kuwe. Sebenzisa iklasi yeeklasi ngeefoto ezithatha ngeyinyathelo kunye nomzobo wokwenza i-origami tulip.
iphepha elilingana ne-20 x 20 cm ukuze lihluthe;
ityhutta ye-cocktail yesiqu;
iisisi okanye isithintelo somabhalana.
Kubalulekile: ukudala intyatyambo, kungcono ukhethe amaninzi amaphepha, apho ngexesha lokulandelela akuyi kuphinda ngephutha endaweni yomgca.
Indlela yokwenza i-tulip ukusuka kwiphepha-imanyathelo ngomyalelo wesinyathelo
Ukuze ufumane intyatyambo enokulinganisa kunye neepalali ezimnandi, iintlobo kufuneka ziqhutywe ngokuthe ngqo kwiimigqaliselo ezijoliswe, zibenze zicacise kwaye zibukhali. Scheme.
Inkqubo yokudala ientyatyambo zentwasahlobo iquka izigaba eziliqela:
I-billet ye-Square i-bend bend diagonally ukuze ibukeke njengothathu onxantathu. Sifaka umsebenzi wokusebenza kwaye senze imisebenzi efanayo kunye neefom. Ngenxa yoko, sifumana isikwere ngeefolda kwifom yesibonakaliso "X".
Faka ifowuni yomsebenzi kwisiqingatha uze uyikhuphe phezulu kunye phezulu.
Ifakwe kumacala omabini epiramidi, iifumba ezide zixhunyiwe kwiziko ukuze unxantathu "neepokotini" zenziwe ngaphakathi.
Amacangca omabini angaphandle aphelile, awakhupha phezulu kwipiramidi. Ngenxa yoko, sifumana umsebenzi owenziwe ngendlela yedayimani, ene-fold phakathi. Ukuba ukhangele ngokukhawuleza, sibona ama-triangles amane.
Ngomsebenzi owenziwe ngedayimane, bhinqa ikhoneni elingakwesokudla kwicala lasekhohlo, lijike kwaye uphinde uphinde usebenze.
Ngoku siqala ikhoneni elingakwesobunxele, okwenza ukuba lihambe ngokukhawuleza ukusuka kwinqanaba leplanga. Siphonya ikhoneni lekunene kwaye siyijikeleze ngakwesobunxele. Inqubo efanayo iya kwenziwa ngaphesheya kwedayimane.
I-bud iphantse ikulungele. Lihlala, lixhaswa kuphela, kwizandi, liye lahleka komnye nomnye, ukuguqula inani.
Kwiziseko zeentyatyambo yenza umngcipheko apho sivuthela khona i-bud. Kwi-bulk bul uvula ii-petals, ziguqa. Ekuvukeni kweentyantyambo zeentyatyambo sidlula i-tube.
I-tulip yephepha enezandla zakho ilungile. Njengoko uyakubona, inkqubo yokudala intyatyambo enhle kakhulu ilula kakhulu. Kwaye umphumo uya kuba yinto ende kuwe kunye nabanye ukukholisa.
Yenza ikhekhe lemali ngezandla zethu
IiNzuzo zeMidaniso yaseMpuma
Umsebenzi wokwindla engadini
Ingelosi yengubo ngezandla zakhe
Indlela yokwenza i-rocket ngezandla zakho - ukusuka ephepheni, kwikhadibhodi, kwiibhotile, kwimidlalo, izicwangciso zefestile, iikholeji zemfundo - Ukwenza imodeli ehambahambayo ye-rocket yendawo kwizinto eziphuculweyo
Indlela yokwenza izikhanyiso ekhaya
Iindlela zokuhlwaya eziholide kakhulu
I-pizza "Iifesi ezinhlanu"
Imbali yembali ye-ophthalmology: keratoconus
Amaphiko enkukhu kwi-honey sauce
Iipascake zengcango zezilwanyana
Ukuqeqesha amadoda okanye iindlela zokuhlala ekhaya
Impawu ezinobomi zamantongomane
Uphi iindawo ezithengileyo kakhulu eYurophu
Ukujongana nokunyamekela kubantu abadala
Ngaba kuyafaneleka ukugqiba isivumelwano somtshato
Mhle kwaye unesizungu
Ubheji obutywala "Ulungelelaniso"
Impilo yomntu kunye nendlela ephilileyo yokuphila
Ikhukhi "Iintliziyo zeTrocolate"
Iipropati zokukhawuleza ze-barberry
I-Gymnastics ebusweni ngokumelene nemibhikane